Wasiir Goodax oo si adag uga hadlay kufsiga iyo dilka marxuumad Xamdi Maxamed. | XAL DOON
Home NEWS Wasiir Goodax oo si adag uga hadlay kufsiga iyo dilka marxuumad Xamdi...
Wasiir Goodax oo si adag uga hadlay kufsiga iyo dilka marxuumad Xamdi Maxamed.
Sii hayaha xilka Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre, ayaa si adag uga fal celiyay dilkii iyo kufsigii Jimcihii Muqdisho loogu geystay gabar lagu magacaabi jiray Xamdi Maxamed Faarax.
Mr. Goodax ayaa tilmaamay in marxuumada ay kamid eheyd ardeydii sanadkan ka gududbtay imtixaankii Shahaadiga ee dowladda qaaday, balse ay hamigeedik baabi’iyeen kuwo manaxayaal ah.
“Waxaan aad u cambaareynayaa kufsiga iyo dilka foosha xun ee loo geystay Allaha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd ardaydii sannadkan u fariisatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Dugsiga Sare. Waxay baabi’iyeen hammigeeda iyo rajadii ay reerkeeda ka lahaayeen” ayuu yiri Wasiirka.
C/llaahi Goodax Barre sii hayaha xilka Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa hay’adaha garsoorka ka codsaday iney talaabo adag ka qaadaan ragga falkaasi u geystay marxuumad Xamdi oo qoys iska danyar ah ka soo jeeday, isagoo rajeeyay in danbiilayaasha sharciga la horkeeni doono.
“Kufsiga iyo ku xadgudubka gabdhaheena sharafta leh waa dambi iyo diin la’aan, waana dhaqan aad u xun oo maalmahan nagu soo xoogeystay. Waxaan ka codsanayaa hay’adaha garsoorka in ay sida ugu dhaqsaha badan ay mudankooda ku marsiiyaan wuxuushtii falkan foosha xun ku dhaqaaqday” ayuj hadalkiisa sik raaciyay.
Si kastaba, Dhacdadan ayaa dareen argagax leh ku abuurtay bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho, iyadoo noqotay midda loogu hadalhaynta badanyahay.
C C W oo si aan laga fileyn ugaga hadlay ra’iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay.
Warar ka soo kordhay kufsigii iyo dilkii loo geystay Xamdi Maxamed Faarax.
Villa Somaliya oo qaaday talaabo lagu carqaladeynayo shirka ka socda madaxtooyada.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo k/Galbeed oo ku dhinac noqday madaxda Puntland iyo Jubaland
Booliska Soomaaliya oo shaaciyay magaca iyo xogta mid kamid ah ragii dilay/kufsaday Xamdi.
Xasan Cali Khayre oo la kulmay Jawaari, isagoo ka dalbaday cafis iyo wada shaqeyn.